Internet Download Manager 6.14 Build2Final + Retail | IT Sharing Network
Internet Download Manager 6.14 Build2Final + Retail
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... Internet Download Manager 6.14 Build2Final + Retail လေးရလို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ်.... အောက်မှာလည်အဆင်ပြေအောင် ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်... ဒီအတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင် idman614f.exe ကို Run လိုက်ပါ... ထုံးစံအတိုင်း Next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Resume download လုပ်ထားတာတွေလည်း မပျက်ပါဘူး 6.14 Build2လည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Dropbox, Mediafire နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်.... ယူသွားလိုက်ပါခင်ဗျာ....
အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်
Uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ default နေရာမှာ complete ကိုရွေးပေးရပါမယ် ....
မီဒီယာဖားရားက ဒေါင်းမည်ဆိုလျှင် ပွင့်လာသော လိမ်စာ၏ နောက်ဆုံးတွင် တစ် တစ်လုံးထပ်ရိုက်ထည့်ပေးပါမှ ဒေါင်းလော့လင့်ကို ရောက်ပါမည်ခင်ဗျာ...
Internet Download Manager Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
Samsung S3 I9305 4.1.1 root လုပ်နည်း
WebcamMax 7.6.8.8 Multilanguage
microsoft security essentials defination offline i...
အသစ်ထည့်သွင်းလိုက်သော Facebook privacy shortcuts မ...
Android Phone အတွက် Advance System Care
Android Phone များအတွက် Call recoder
USB Drive ထဲက DATA တွေကိုအမြန်ဆုံးကူးမယ်
Internet Download Manager 6.14 Build2Final Porta...
Applied AutoCAD 3D Modelling By Robert TinAye
Applied AutoCAD Drafting 2D 2009 By Robert TinAye...
Internet Download Manager 6.14 Build2Final + Ret...
Autocad 2005 By U Aung Myint
Bad Piggies v1.1.0 for PC
Wise Care 365 Pro 2.14 Build 164
Xilisoft Video Converter Ultimate 7.6.0 Build 2012...
၀င်းဒိုး လုပ်တာ 2.1.8 + WAT Fix
G-Talk ( G-Talk နှင့်ပတ်သက်သမျှ)
Internet and Data Security (ဖေ့ဘွတ်အကောင့်ဘာကြောင်...
Networking Edition (မြန်မာလို)
Blog site အလှဆင်ခြင်း
Making Myanmar WordPress Blog Handbook (မြန်မာလို)...
Change CPU Information
.Net 2.0 Fundamental ( ပြည့်ဖြိုးမောင်မောင် )
အခြေခံ Hacking နည်းပညာစာအုပ်
Internet Download Manager 6.14 Build 1 Final (patc...
Hacking ဗဟုသုတ (XSS,DDOS,Hacker & Cracker)
WinTools.net ( Premium, Proffesional, Classic, Ult...
Malwarebytes Anti-Malware 1.65.0.1400 Beta
P-Apps V 1.2 ( Make your software to be Portable S...
Avast 2050 Activator
Windows Expert Tool 4.5.0 For Recover all Password...
GOM Player 2.1.47 Build 5133 Final
Facebook ဘယ်လို ဟတ်မလဲ (မြန်မာလို)
G-Mail & Yahoo Mail Cracking (E-book မြန်မာလို)
Buffer OVerflow (E-book Myanmar Version)